PICS: MDC Congress kicks off in Gweru » ZOOM Zimbabwe News
May 25, 2019 296 No comment
“Democracy never fails. Expecting a revolutionary @HEBobiwine of Uganda as one of the special guests from the African continent,” an elated Chamisa revealed.
“The host province, Midlands has engaged a high gear as all roads lead to Gweru tomorrow for the MDC historic Congress at Ascot Stadium which will define a new course for Zimbabwe,” said Dr Takavafira Zhou, the party’s Secretary for Information and Publicity in Midlands Province.
Earlier on Friday night, the party’s outgoing national deputy chairman Tendai Biti gave his take of the momentous occasion:
MDC Deputy National Chairperson @BitiTendai just arrived at Ascot Stadium where the party is holding its congress.
MDC Deputy National Chairperson Tendai Biti arrived Friday evening at Ascot Stadium where the party is holding its 5th congress.
Posted by ZOOM – Zimbabwe News on Friday, 24 May 2019
More on ZOOMZimbabwe... Vimbai's accident: MDC members tear each other with accusations
Tags: 2019 mdc congress Nelson Chamisa Takavafira Zhou
Chamisa secures Mudzuri’s backing
WATCH | Voting for Women and Youth wings at MDC Congress in Gweru